အမေတွေသိဖို့လိုတဲ့ စနစ်မှန်တဲ့ ကလေးဆေးတိုက်နည်း | OnDoctor
အမေတွေသိဖို့လိုတဲ့ စနစ်မှန်တဲ့ ကလေးဆေးတိုက်နည်း
😷 4,299 Total Cases
😥 68 Deaths
😇 944 Recovered
By OnDoctor Editor	 On Apr 17, 2020 Last updated Apr 17, 2020
ကလေးတစ်ယောက်နေမကောင်းဖြစ်ရင် မိဘတွေမှာ စိတ်ညစ်စရာ နှစ်ခုရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
နံပါတ်တစ်က ကလေးရောဂါကြီးကြီးမားမားဖြစ်မှာ ကလေးတစ်ခုခုဖြစ်မှာစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်နှစ်ကတော့ နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ကလေးရဲ့ အလိုမကျမှု ဂျီကျ ငြင်းဆန်မှုတွေကို ကိုင်တွယ်ရခက်တဲ့ ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကလေးဆေးတိုက်ရခက်တဲ့ ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆေးလေးသောက်လိုက်ရင် ကလေးမြန်မြန်နေကောင်းသွားမှာပဲလို့သိတဲ့ မိဘတွေရဲ့ အသိဉာဏ်နဲ့ ပူပင်မှုက ကလေးရဲ့ ဒီဆေးကခါးတယ်..ဆေးမသောက်ချင်ဘူး..နေမကောင်းရတဲ့အထဲ ဆေးတွေမသောက်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ ငြင်းဆန်လိုစိတ်တွေကြားမှာ နှစ်ဖက်လုံးအတွက် စိတ်ညစ်စရာတွေပိုဖြစ်စေပါတယ်။
ကလေးအတွက် စိတ်ပူလေ ဆေးတိုက်ချင်လေ ကလေးကငြင်းလေ ပိုစိတ်ညစ်လေနဲ့ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ အမေတွေဆိုရင် ရူးချင်လောက်အောင် စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။
ကလေးကို ဆေးဘယ်လိုတိုက်ရမလဲဆိုတာမပြောခင်မှာ ဘယ်လိုတော့ လုံးဝမတိုက်ရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို အရင်ပြောပါမယ်။
– ကလေးကို အသိမပေးဘဲ မတိုက်ပါနဲ့
– လုံးဝ ချုပ်ပြီးမတိုက်ပါနဲ့
– နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အာခေါင်ထဲ ဆေးရည်ကို အမြန်ထည့်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့
– လှဲနေရင်း မတိုက်ပါနဲ့
– ဆေးပမာဏအများကြီးကို တစ်ခါတည်းမတိုက်ပါနဲ့
– အရင်တခါနေမကောင်းဖြစ်တုန်းကဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ဆေးကို နောက်တစ်ကြိမ်နေမကောင်းဖြစ်ချိန်မှာဖြစ်စေ..နောက်ကလေးတစ်ယောက်နေမကောင်းဖြစ်ချိန်မှာဖြစ်စေ ပြန်မတိုက်ပါနဲ့
ဒီအချက်တွေကတော့ ကလေးတွေသီးပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲဆေးဝင်သွားနိုင်တဲ့အချက်တွေ၊ အသက်အန္တရာယ်အထိဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ အချက်တွေမို့ လုံးဝရှောင်ရပါမယ်။
ကလေးတစ်ယောက်ကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ စနစ်တကျဆေးတိုက်မယ်ဆိုရင် ??
မိမိကလေးက ဘယ်လိုအရသာ ဘယ်လိုပုံစံကြိုက်တတ်တယ်..ဘယ်လိုပြောရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးကို လေ့လာမှတ်သားထားပါ။
တခါတလေကျရင် ကလေးကြိုက်အရသာထည့်ထားတဲ့ ဆေးရည်တွေမှာတောင် ချဉ်လို့ ကလေးမသောက်ချင်တာ အရမ်းချိုလို့ မသောက်ချင်တာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။
ဘာလို့မသောက်ချင်တာလဲ မေးပါ။ ကလေးစကားကို အလေးအနက်ထားပါ။
ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် ဓာတ်ဆားရည်ကို ကလေးတွေအတွက် ထုတ်ထားတဲ့ အသီးအရသာပါတဲ့ တံဆိပ်မျိုးစုံကို ငြင်းဆန်ပေမဲ့ BPI ထုတ် ကလေးတွေကြိုက်လေ့မရှိတဲ့ ငန်ကျွိကျွိဓာတ်ဆားကိုမှ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်သောက်တာကို ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရပါတယ်။
ဒီတော့ ကလေးတွေကို ပုံသေနည်းချပြီးတွက်လို့မရဘဲ အမြဲလေ့လာနေဖို့လိုပါတယ်။
– ကလေးကို အရင်အသိပေးပါ၊ ရှင်းပြပါ
ကလေးပေမဲ့လည်း လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ သူ့မှာလည်း သိပိုင်ခွင့်၊ ရွေးချယ်ခွင့် ၊ ငြင်းဆန်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။
သားအခုနေမကောင်းဖြစ်တာပျောက်သွားအောင် ကောင်းကောင်းဆော့နိုင်အောင် အပြင်ကိုလျှောက်လည်နိုင်အောင် ဒီဆေးလေးသောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ နားဝင်အောင် ချိုချိုသာသာပြောပါ။
နားမလည်နိုင်သေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေဖြစ်ရင်တောင် ဆေးမတိုက်ခင် အရင်အသိပေးပြီးမှတိုက်ရပါမယ်။
ဆေးအရသာကို သူကြိုက်တဲ့ အသီးအရသာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
ဆေးသောက်ဖို့နေရာကို သူရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ ဥပမာ သူကြိုက်တဲ့ထိုင်ခုံလေးနဲ့ထိုင်သောက်မလား ဝရန်တာမှာ ငှက်ကလေးတွေကြည့်ရင်းသောက်မလား.. ကာတွန်းကားကြည့်ရင်းသောက်မလား…ဆော့ရင်းသောက်မလား စသည်ဖြင့်ပေါ့။
သူစိတ်ဝင်စားမဲ့ သူကြိုက်မဲ့ Activity တစ်ခုခုနဲ့ တွဲပြီးဆေးတိုက်ရင် ပိုလွယ်ကူတတ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ သူကြိုက်တဲ့ ဇွန်း/ပန်းကန်လေးတွေထဲ ထည့်တိုက်ဖို့ ရွေးချယ်ခွင့်ပေးလို့ရပါတယ်။
ဆေးကိုအချိန်အတွယ်မှန်အောင် ထည့်ပေးဖို့တော့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဆေးတိုက်ခြင်းမှမဟုတ်ပါဘူး တခြားကိုင်တွယ်ထိန်းကျောင်းရခက်နေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးမှာ Reward system ကို သုံးလို့ရပါတယ်။
ဒီဆေး ဘယ်နှစ်ကြိမ်သောက်ပြီးရင် သမီးလိုချင်တာရမယ်..ဆေးသောက်လို့ နေကောင်းသွားရင် သားသွားချင်တဲ့နေရာပို့ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေက များသောအားဖြင့် အလုပ်ဖြစ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေကို ဆေးသောက်ဖို့ ဆွဲဆောင်တာအပြင် ဘာတွေသိဖို့လိုသေးလဲ ??
အရေးအကြီးဆုံး အချက်ကတော့ တိုက်မဲ့ဆေး မှန်ကန်ဖို့ ၊ အချိန်အတွယ် မှန်ကန်ဖို့ ၊ အကြိမ်ရေမှန်ကန်ဖို့ ၊ ဆေးသက်တမ်းမလွန်နေဖို့၊ ဆေးအထားအသိုမှန်ကန်ဖို့ ဒီအချက်လေးတွေ ထပ်ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
– ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ကို တိတိကျကျလိုက်နာပါ
– ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလိုတဲ့ Over the counter ဝယ်လို့ရတဲ့ အိမ်သုံးဆေးဝါးတွေဖြစ်နေရင်တောင် နားလည်သူကို မေးမြန်းပြီးမှတိုက်ပါ
– ကလေးဆေးကို လူကြီးဆေးတွေနဲ့ ရောမထားပါနဲ့
– ကလေးတွေ လက်လှမ်းမမီတဲ့နေရာမှာပဲထားပါ
– အေးမြခြောက်သွေ့တဲ့နေရာမှာပဲဆေးတွေကို သိမ်းဆည်းပါ နေရောင်တိုက်ရိုက်မထိပါစေနဲ့
– ဆေးတိုက်ရင် ကလေးကို မတ်မတ်ထားပြီး တိုက်ပါ ဖြည်းဖြည်းညင်ညင်သာသာတိုက်ပါ
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မှာချင်တဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ကလေးနေမကောင်းဖြစ်ရင် ဆေးတိုက်ဖို့ထက် ကလေးနေမကောင်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတာမို့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးပိုဂရုစိုက်ပေးဖို့၊ ကာကွယ်ဆေးတွေပုံမှန်ထိုးနှံတိုက်ကျွေးဖို့ နဲ့ အစာအာဟာရပြည့်ဝမျှတအောင်ကျွေးဖို့ ပိုဂရုစိုက်ပေးကြပါလို့ မှာချင်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ကလေးတွေကိုနေမကောင်းမဖြစ်လွယ်အောင် ဘာတွေကျွေးဖို့လိုလဲ
ပြန်ပျောက်နိုင်တဲ့ကင်ဆာဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေမှာပဲရှိတာလား ?
မေမေတစ်ယောက်ကို စိန်ခေါ်နေတဲ့ အခက်အခဲများ
ကလေးတွေကို ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်အောင် ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပေးရမလဲ
COVID-19 အပါအဝင် ရောဂါပိုးတွေကာကွယ်ဖို့ အမေတွေ ကလေးကို ဘာတွေသင်ပေးထားဖို့လိုလဲ
မပေါ့ဆသင့်တဲ့ ခွေး၊ကြောင် ကုတ်ခြစ်ဒဏ်ရာ
Vitamin C ချို့တဲ့ရင် ဘယ်လို လက္ခဏာတွေဖြစ်မလဲ
Vitamin A က ဘယ်အစားအစာတွေမှာ အများဆုံးပါသလဲ
ကလေးတွေကို ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်အောင် ငယ်ငယ်ကတည်းက…
ရှေ့သို့	နောက်သို့ 1 of 2